Tag: nhare inopindura email » Martech Zone
Tag: nhare inopindura email
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Pakupera kwegore rino, pamusoro pe80% yevakuru veAmerica vanenge vaine smartphone. Nharembozha dzinotonga zvese zviri zviviri B2B uye B2C nharaunda uye mashandisiro avo anotonga kushambadzira. Zvese zvatinoita iye zvino zvine nharembozha kwazviri yatinofanira kuisa mukati medu nzira dzekutengesa. Chii chinonzi Kushambadzira Kwenharembozha kushambadzira kushambadzira pane kana nenhare mbozha, senge smart phone. Kushambadzira kwenhare kunogona kupa vatengi nguva nenzvimbo
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Hapana chinhu chinondishungurudza zvakanyanya senge pandinovhura email yandinotarisira pafoni yangu uye handikwanise kuiverenga. Pamwe mifananidzo yacho yakaoma -kodhi upamhi iyo isingapindure kuchiratidziro, kana iwo mavara akapamhama zvekuti ndinofanira kupururudza neshure kuti ndiverenge. Kunze kwekunge yakakosha, ini handimiriri kuti ndidzokere kudesktop yangu kuti ndiverenge. Ndinoibvisa.
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Sezvo isu tanga tichitsvaga kuti tivandudze kuita kwedu, chinhu chekutanga chatakaita ndechekuteerera anoteerera maemaema matemplate tichishandisa yedu chikuva, CircuPress, kugovera izvo zvirimo (Nyorera zuva nezuva kana vhiki nevhiki). Iko shanduko muhuwandu hwakanga husiri pfupi kupfura kunoshamisa. Isu tinotumira email yedu yevhiki nevhiki kune vanopfuura 70,000 vanyoreri neMuvhuro uye analytics yedu inotiratidza kuti ndiyo spike mumugwagwa wedu kupfuura chero imwe svikiro kana kusimudzira. Izvo hazvina kuitika kusvika
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Ini handina chokwadi chega chega email yekushambadzira manhamba pano yakakosha kune yako email kushambadzira, asi mashoma acho anonyatso kumira kwandiri: Email Kushambadzira Revenue inoshamisika yakaderera uye iri kure isingashandiswe. Ini ndinogara ndichishamiswa pane yedu yega blog kuti yemusoro kushambadza inogara ichitengesa kunze ... asi hapana munhu akatenga kushambadza pane yedu yemazuva ese uye yevhiki tsamba tsamba inosvika vanopfuura 75,000 vanyori vhiki rega. Email Kugamuchirwa kuri panhongonya, ne